Canaanta Mareykanka ee Soomaaliya oo joogto noqotay | KEYDMEDIA ONLINE
Canaanta Mareykanka ee Soomaaliya oo joogto noqotay
Maamulka Jeo Biden, ayaa markale wax ka yar 24 saac gudahood ku celiyay hanjabaad ku wajahan hoggaamiyaasda Soomaaliya.
WASHINGTON – Dowladda Mareykanka ayaa saacado kooban kadib gooddiskii Afhayeenka Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, mar kale soo saartay hanjabaad kale oo ku wajagan hoggaamiyayaasha siyaasadda Soomaaliya.
Maraykanku, wuxuu ku gooddiyay in xayiraado dhanka socdaalka ah uu kusoo rogi doono qaswadayaasha hor taagan hirgalinta doorashada, haddii uu sii socdo dib-u-dhac doorashooyinka Golaha Shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee JFS.
“Doorashada Soomaaliya ayaa in ka badan hal sano dib uga dhacday waqtigii loogu talagalay in ay ku qabsoonto, Mareykanku, wuxuu diyaar u yahay inuu qaado tillaabooyin ka dhan ah kuwa qaska wada, haddii wakhtiga cusub ee Golaha Wadatashiga Qaranka dejiyay aan lagu dhameystirin doorashada”, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Mareykanka.
Shalay ayay ahayd markii sidaan oo kale, Afhayeenka Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price, oo war-baahinta la hadlay ugu baaqay Madaxda Dowlad-Goboleedyada iyo kuwa heer Federaalka in ay ilaaliyaan waqtiga cusub ee lagu heshiiyay, isla markaana dhaqan galiyaan heshiiskii dhawaan lagu saxay khaladaadkii hore.
Canaanta Mareykanka ayaa sare u kacday toobaadkaan, waxayna u muuqdaan in ay ka baddeleen hadalladii qaboobaa ee Farmaajo ku wajahnaa iyo ku boorintii ay madaxda siyaasada Soomaaliya ku dhiirragalinayeen sii wadidda niyad wanaagga iyo wada shaqaynta iyo kana fogaadaan ficillada halis gelinaya xasilloonida dalka.
Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa 9-kii Janaayo go’aamiyay in doorashadda Aqalka hoose la soo gaba-gabeeyo mudo 40 maalin gudahood ah, January 15 illaa Febuary 25, taasoo la rumeysan yahay inay adag tahay fulinteeda.
Qaar ka tirsan Madaxweynayasha maamullada taabacsan Farmaajo, ayaa isaga baxay dalka dawaan, waxaana tallaabadas loo fasirtay in ay durba billaabeen caga-jiidka doorashada.
Farmaajo oo todobaadkaan la hadlay bogga wararka u faafiya Villa Soomaalya, wuxuu inkiray Guddiga Doorashooyinka iyo RW Rooble, oo ah hoggaanka hirgalinta doorashooyinka.
Durba kooxda waqtigu ka dhamaaday ayaa billowday ku rafashada Guddiyada Doorashooyinka, waxayna shalay abaabuleen isku day ay ku doonayeen in ay ku kala jibiyaan Guddiga doorashooyinka ee heer Galmudug.